ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ ယောဟနျသ Lundstram ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
LB သည်ဘောလုံးပါရမီရှင်တစ် ဦး အကြောင်းအပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်သည်။ရယ်စရာ“ ကျွန်ုပ်တို့၏ John Lundstram ကလေးဘဝပုံပြင် Plus ၏မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်သင့်ကလေးဘ ၀ မှယနေ့အထိထင်ရှားသောအဖြစ်အပျက်များကိုသေသေချာချာဖော်ပြသည်။
ဂျွန် Lundstram ၏အစောပိုင်းဘဝနှင့်ထ။ Image Credit- ။, ဘီဘီစီ, MSN ကို လီဗာပူးလ်
သူရဲ့အစောပိုင်းဘဝ / မိသားစုနောက်ခံ၊ ပညာရေး / အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝ၊ ကျော်ကြားမှုလမ်း၊ ကျော်ကြားမှုပုံပြင်၊ ဆက်ဆံရေးဘဝ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ၊ မိသားစုအချက်အလက်များ၊
ဟုတ်တယ်၊ သူဘယ်သူ့ကိုမှအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာမှမထဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်အားလုံး ဖြစ်လာရန် အ 2019 / 2010 ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအစကောင်းခဲ့သောသူ၏လျှပ်စစ် Sheffield ယူနိုက်တက်အသင်း၏နှလုံးခုန်။ သို့သော်ဘောလုံးပရိသတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သော John Lundstram ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မိသားစုနောက်ခံနဲ့အစောပိုင်းဘဝ
John David Lundstram ကိုဖေဖော်ဝါရီလ 18 ၏ 1994 နေ့တွင်သူ၏မိဘများသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းလီဗာပူးလ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှအင်္ဂလိပ်လူမျိုးသည်သူ၏ချစ်စရာကောင်းသောမိဘများကိုဒုတိယမြောက်ကလေးအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။
John Lundstram ၏မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ပုံခရက်ဒစ် - Instagram
John Lundstram သည်သူ့အဖေလည်ပတ်နေသည့်လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံမှလီဗာပူးလ်မှနေ့စဉ်ပေါင်မုန့်ရရှိသည်။ John Lundstram သည်သူ၏မိသားစုမှဆင်းသက်လာသောလီဗာပူးလ်မြို့မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးသောခရီးသည်တင်မီးရထားလမ်း (1830 တွင်တည်ဆောက်သည်) နှင့် Guinness of the Book of English အမည်ဖြင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
John Lundstram သည်သူ့မိဘများနှင့်အတူတစ်ကိုယ်တည်းမကြီးထွားခဲ့ပါ။ သို့သော်နာမည်ကျော်အစ်မဖြစ်သူဂျိုဒီ Lundstram (7 သည်သူ၏အကြီးတန်း) နှင့်အတူ မင်းသိလား?… ဂျိုဒီ Lundstram သည်မင်းသမီးအတွက်လူကြိုက်များသောမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့သည် ဗြိတိသျှရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲ 'အကူအညီလိုအပ်နေ Scousewives'' ။
ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
သူ၏ပထမဆုံးပညာရေး - အနီရောင် / အပြာရောင်မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း - It မင်းရဲ့မိသားစုအရင်းအမြစ်တွေရှိမရှိအရေးမပါဘူး လီဗာပူးလ်မြို့။ သင်ဟာအပြင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပင်ရင်းရင်းနှီးနှီးပဲဖြစ်ပါစေသင်၏ခြေထောက်ကမြို့ရဲ့အခြေခံပေါ်မှာရှိနေသရွေ့အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုသင့်အားမေးလိမ့်မည်။ မင်းအနီရောင်လား လီဗာပူးလ် or အပြာ [အဲဗာတန်] ?.
ပထမပညာရေး Lundstram သည်ကလေးဘဝတုန်းကမေးခွန်းကိုဖြေရန်ဖြစ်သည်။ အကြွေး: Society19.
မေးခွန်းကိုဖြေကြားနေစဉ်အတွင်းသင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေဆိုရန်ဆုတောင်းသင့်သည်။ ဤသည် Tranmere Rovers ကဲ့သို့ကြားနေကလပ်ရွေးချယ်ခြင်းမဆိုလိုပါ။ John Lundstram အတွက်တော့အဖြေပဲ အနီေရာင် [လီဗာပူးလ်], ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအင်္ဂလိပ်ကလပ်ကိုထောက်ခံသည့်သူ၏မိသားစုဝင်များနှင့်အတူသွားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခု။
ဘောလုံးဝါသနာရှင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကျောင်းပြီးသည့်အခါရံဖန်ရံခါဂိမ်းကစားခြင်းအပြင် Lundstram အနည်းငယ်သာသူသည်သူ့အားဘောလုံးလောကတွင်နာမည်ကောင်းရရန်စွမ်းရည်ရှိကြောင်းသိသည်။ အစောပိုင်းကပင်မာကျောသော၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသောအင်္ဂလိပ်လူသည်သူ၏ကုန်သွယ်ရေးကိုစတင်လေ့လာခဲ့သည် ဒေသခံကွင်းပေါ်တွင်ကွင်းလယ်လူ။
လီဗာပူးလ်သည်အနီကတ်ကိုထောက်ခံသည့်အလိုဆန္ဒရှိသည့်ကလေးများနည်းတူသူ၏ချစ်မြတ်နိုးသောလီဗာပူးလ်အသင်းနှင့်ပါပူးပေါင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်ကလပ်၏ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုခံယူရန်သူ၏တိုးတက်မှုကိုတားဆီးခဲ့သည်။ သူပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက်သူသည်အိမ်နီးချင်းများနှင့်ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သောအဲဗာတန်ကိုလမ်းကြောင်းအတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
John Lundstram ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မရေတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
အောင်မြင်သောရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင် John Lundstram သည် 2002 နှစ်တွင်အဲဗာတန်အကယ်ဒမီတည်ဆောက်မှုတွင်စာရင်းသွင်းခြင်းခံရသည်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးသူ၏အလုပ်ကိုအခြေခံခဲ့သည်။ Merseyside ကလပ်သို့ ၀ င်ရောက်သောအခါ၊ သို့သော်ယောဟန်အနည်းငယ်သည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၏အမည်ကိုစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, tသူသည်အရေးကြီးသောမွေးနေ့ပါတီများ၊ မိသားစုလူမှုရေးနှင့်သူကျောင်းတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများလွဲချော်ခဲ့ရသည့်အချိန်များရှိသည်။ သို့သော်လှန်ကြည့်ရသည်မှာ Lunny နည်းနည်း (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သည်သူနှစ်သက်ရာကိုလုပ်နေသည်။ မိမိအစိတ်အားထက်သန်သည်သူ၏အလုပ်အောင်.
John Lundstram အကယ်ဒမီဘောလုံးနှင့်အစောပိုင်းဘဝ
Lundstram သည်အဲဗာတန်အကယ်ဒမီရာထူးတက်စဉ်ကတိက ၀ တ်များစွာပြခဲ့သည်။ Merseyside (လီဗာပူးလ်အသင်း၏အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ခြင်း) မှသူ၏မိသားစုမှဆင်းသက်လာသူသည်aဇူလိုင်လ 2010 ပတ်ပတ်လည်၌အချိန်ပြည့်ပညာသင်ဆု။
၏နှစ်နှစ်ပြီးနောက် သူသည်အကယ်ဒမီအဆင့်များသို့တက်လှမ်းခဲ့ပြီးအဲဗာတန်အကြီးတန်းဘက်သို့တက်လှမ်းခဲ့ပြီးမျှော်လင့်ချက်နှင့်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိခဲ့သည်။ ဒေးဗစ်မိုယက်.
ဟုတ်ကဲ့! ယခင်အဲဗာတန်မန်နေဂျာသည်လူငယ်ကစားသမားများကိုအဲဗာတန်အကြီးတန်းအသင်းသို့အာမခံရန်သူ၏အခန်းကဏ္hisကိုအလွန်နှစ်သက်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်က Lundstram သည်သူ၏အကြိုက်ဆုံးများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သို့သော်, နည်းနည်း Lunny သိခဲ့တယျ မှောင်မိုက်ကို TIMES မိမိအလမ်းလာမယ့်ခဲ့သည်။
John Lundstram ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မရေတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame ပုံပြင်ရန်ခက်ခဲလမ်း
ဒေးဗစ်မိုယက်စ်၏နှလုံးခွဲစိတ်မှု မေလ 2013 ၌, အောက်ပါ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနားယူတော့မည် ယူနိုက်တက် သူသည်အသင်းမှထွက်ခွာလိမ့်မည်ဟုအဲဗာတန်သို့ပြောကြားခဲ့သည် ဖာဂူဆန်။ ဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေစဉ်ဤသတင်း ဒေးဗစ်မိုယက်ဖာဂူဆန်သည်မန်ယူအသင်း၏နည်းပြ ၀ န်ထမ်းများအားလုံးနှင့်အတူမန်ယူအသင်းနှင့် ပိုမို၍ စိမ်းလန်းသောကျက်စားရာနေရာများသို့မျှော်လင့်နေသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။
Lundstram စဉ်းစားသောအရာသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။ မင်းသိလား?… ဒေးဗစ်မိုယက် Roberto Martínezကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ သူသည်သူ့ကိုယ်ပိုင် Wigan အားကစားနောက်ခံ ၀ န်ထမ်းလေး ဦး ကို Everton သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
Lundstram သည်အဖွဲ့ဝင်များကိုမြင်တွေ့ရသောအခါဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့သည် ဒေးဗစ်မိုယက်အဲဗာတန်နောက်ခံလူမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်လိုက် ၎င်းနောက်တွင် Roberto Martinez သည်ကစားသမားအသစ်များကိုသူ၏ Everton အသင်းသို့ Lundstram အသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံကြောက်ရွံ့ရိုသေလေးစားပါ။
ညံ့ဖျင်းသော John Lundstram သည်အဲဗာတန်နှင့်သူ၏အနာဂတ်ကိုထင်ဟပ်နေသည်။ Image Credit ။
သူသည်သူ၏ချေးငွေများကိုပေးဆပ်ရန်ထွက်ခွာသွားသော်လည်း Lundstram သည် Roberto Martinez ၏ဘေးဖယ်ခံနေရခြင်းကြောင့်သူ၏နေရာအတွက်တိုက်ခိုက်ရန်သူ၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးပစ်ရန်မထိုက်တန်ဟုခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ နာကျင်သောစကား၊
"ဘယ်တော့လဲ ဒေးဗစ်မိုယက် အဲဗာတန်မှာရှိနေတုန်းကျွန်တော်ဟာသူ့ကစားသမားဘ ၀ မှာပါ၊ ပထမဆုံးအသင်းကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူကကလပ်ကနေထွက်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်အတွက်တော့အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်Martínezလက်အောက်ရှိပထမဆုံးအသင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ အဲ့ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတိုးစေပြီးပြန်လာစေပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်ခဲ့တယ်။ ”
မင်းသိလား?… မိမိဇာတိမြေကလပ် (အဲဗာတန်) နှင့်အတူရာသီတစ်ခုအိပ်မက်ဆိုးမြင်ပြီးနောက်ဆင်းရဲသော Lundstram ကိုကလပ်မှလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ တကယ်တော့NY အကယ်ဒမီဘွဲ့ရနှင့်ကလပ်အသင်းမှလွတ်မြောက်လာခြင်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့်လူငယ်ဘောလုံးသမားသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နာကျင်မှုနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကိုကောင်းစွာသိလိမ့်မည်။ John Lundstram ၏မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့်ရင်းနှီးသောသူငယ်ချင်းများ (သူ၏အဲဗာတန်အသင်းဖော်များအပါအ ၀ င်) သည်ဤခက်ခဲသောအချိန်၌သူ့အနားတွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
John Lundstram ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မရေတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
တွင် Moving: အဲဗာတန်မှလွတ်လာပြီးနောက် Lundstram သည်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးဘောလုံးဘောလုံးကိုရရှိရန်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးအဆင့်နိမ့်သို့တက်ရန်သူ၏မိဘများ၊ မိသားစုများနှင့်သဘောတူခဲ့သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သူကတစ်ကြိမ်ပြောကြားခဲ့သည်;
“ ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်ကတော့အစပိုင်းတွင်ချန်ပီယံလိဂ်ကိုပြန်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ပါ၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသက်သေပြဖို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုသွားဖို့ပါ”
Lundstram ၏ခရီးသည်လိဂ် ၂ ၏အောက်စ်ဖို့ဒ်ယူနိုက်တက်နှင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည်အနည်းငယ်မျှသောထည့် ၀ င်မှုကြောင့်အသင်းကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာပြီးနောက်မှ (ပရီးမီးယားလိဂ်) ထိပ်တန်းရာထူးကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ပရိသတ်များမှားကြောင်းသက်သေပြ ကစားသမားတစ် ဦး နှင့်မန်နေဂျာတစ် ဦး အကြားဆက်နွယ်မှုသည်အောင်မြင်မှု (သို့) ပြaနာတစ်ခု၏ကွာခြားမှုကိုမကြာခဏဖြစ်နိုင်သည်။ Sheffield United မန်နေဂျာ Chris Wilder သည် John Lundstram နှင့် 2019 / 2020 ရာသီမတိုင်မီရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူသည် Lundstram သည် 2019 / 2020 ရာသီသစ်အတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထပ်မံ၍ လူသိရှင်ကြားကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်ရှက်ဖီးပရိတ်သတ်များအနေဖြင့်သူသည်ချန်ပီယံလိဂ်ရာသီပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းကစားနိုင်ခြင်းမရှိသလောက်နည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Lundstram ကိုစွန့်ခွာရန်ဖိအားပေးမှုများစွာရှိသော်လည်း Sheffield မန်နေဂျာ Chris Wilder သည်အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်သူ၏ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော Sheffield United အသင်း၏အလှအပကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက်အဓိကလူသားဖြစ်ရန်ပရောဂျက်အားဖြင့် Sheffield မန်နေဂျာ Chris Wilder ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ Lundstram သည်ကလပ်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော 2019 / 2020 ပရီးမီးယားလိဂ်အစတွင်သူ၏ဥက္ကာပျံမြင့်တက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်အခွင့်အရေးအားလုံးကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်နောက်ဆုံးရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Chris Wilder သည် John Lundstram အားသူ၏ဘဝကိုအခွင့်အလမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် Sheffield United ပရိသတ်များနှင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ အကြွေး - FourFourTwo
John Lundstram အတွက်သက်သေပြရန်အချက်နှစ်ချက်နှင့်အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ ပထမမှာရှက်ဖီးလ်ယူနိုက်တက်ပရိသတ်များအားသက်သေပြရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယမှာအဲဗာတန်ကိုလက်စားချေရန်ဖြစ်သည်။ သူ၏ပထမဂိုး (စက်တင်ဘာ 21st၊ 2019) တွင်အနိုင်ရလဒ်ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ချိုအနုပညာနောက်ဆုံးတော့ 21st စက်တင်ဘာ 2019 နေ့မှာ Sheffield ဟာအဲဗာတန်ကိုအနိုင်ယူပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာအကြီးမားဆုံးမစ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အချို့သောအဲဗာတန်ပရိသတ်များအတွက်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်ခြင်း (သို့) ဂိုးသွင်းနိုင်ခြင်းသည်စောင့်ကြည့်ရခြင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. သို့သော်ယောဟန် Lundstram ကိုမြင်လျှင် (ယခင်ကသူတို့နှင့်အတူကစားသူတစ် ဦး) သူတို့ရဲ့ (0-2) ရှုံးနိမ့်မှုမှာအဓိကလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာပရိသတ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေကိုနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေပါတယ်။
John Lundstram ကသူ့အသင်းဟာအဲဗာတန်ကိုတစ်ချိန်ကအနိုင်မရခဲ့တာကိုအနိုင်ယူပြီး သူပြောတာက ရေဒီယိုရှက်ဖီးလ်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်း (Credit to ရှီးဖီးယူနိုက်တက်ယူကျုချန်နယ်).
John Lundstram သည်ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ၌စိတ်အားထက်သန်မှုနည်းပါးသောဤလျှပ်စစ်ရှပ်ဖီးယူနိုက်တက်အသင်း၏နှလုံးခုန်နှုန်းဖြစ်လာပြီးသူ၏မျိုးဆက်၏အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်လူတစ် ဦး ဖြစ်လာစေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
John Lundstram ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မရေတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - relationship ဘဝ
သူသည်ကျော်ကြားမှုနှင့်အတူဥက္ကာပျံမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် John Lundstram တွင်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ဇနီးရှိသလားဟုဘောလုံးပရိသတ်အများစုကမေးမြန်းခဲ့ကြမည်မှာသေချာသည်။ ဟုတ်ကဲ့ tသူ၏လှပသောအသွင်အပြင်၊ ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောအပြုံးနှင့်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောအရည်အသွေးများကြောင့်သူမယောက်ျားအတွက်ရည်းစားဖြစ်လိုသောဆန္ဒများစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံး၌ရှိနေသည်ဟူသောအချက်ကိုငြင်းဆန်။ မရပါ။
ပရိသတ်များက John Lundstram's Girlfriend သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမေးခွန်းများမေးခဲ့သည်။ Credit- Instagram ကို
John Lundstram သည်သူရည်းစားနှင့်ဇနီးကိုမထုတ်ဖော်ရန်သတိကြီးစွာကြိုးပမ်းခဲ့သည် (စာရေးနေစဉ်)သူကလျှို့ဝှက်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၌ရှိ၏ပြီးသားလျှင်)။ သို့သော်ပရီးမီးယားလိဂ်၏ခွင့်မလွှတ်နိုင်သည့်သဘောသဘာဝအားဆက်ဆံရေးကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ Lundstram သည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့် WAG မရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
John Lundstram ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မရေတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
John Lundstram ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုလေ့လာခြင်းသည်သူ၏ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုပြဇာတ်၏အစတွင်မြင်နိုင်ရန်သင်ကူညီလိမ့်မည်။ သူဟာအလွန်ဖော်ရွေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘောလုံးကွင်းထဲကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်တယ်။
John Lundstram ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်သိကျွမ်းခြင်း။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်။ Instagram ကို
အောက်ဖော်ပြပါပုံမှကြည့်လျှင် John Lundstram သည်ဘဝကိုအလိုအလျောက်နားလည်ခြင်းရှိသည်ကိုသင်နားလည်လိမ့်မည်။ သူဟာအခြားသတ္တဝါတွေနဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ အတ္တ နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ထား၏။ သူကပြန်လာဘာမှမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲဤအမှုကိုပြု။
John Lundstram ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မရေတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုဘဝ
John Lundstram သည်လီဗာပူးလ်မိသားစုမှဖြစ်ပြီးဘောလုံးထက်အခြားစွမ်းရည်များပြည့်နှက်နေသည်။ သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်သူ့အစ်မ၏အောင်မြင်မှု သူတို့မိသားစု၏ဘဏ္financialာရေးလွတ်လပ်မှုကို ဦး တည်သည်။ Lundstram ၏အစ်မဖြစ်သောဂျိုဒီ Lundstram (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သည်ဗြိတိသျှအဖြစ်အပျက် Desperate Scousewives အတွက်သူမ၏အခန်းကဏ္successတွင်အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။
John Lundstram ၏ညီမဂျိုဒီ Lundstram ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်။ Closeronline
လတ်တလောတွင်ဂျိုဒီ Lundstram သည်လီဗာပူးလ်တွင်အချိန်ပြည့်လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်လီဗာပူးလ်ရှိနာမည်ကြီး Lash Beach UK နှင့် Aesthetics (Medical spa) ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။
John Lundstram အတွက်သူ၏ကျော်ကြားမှုအဆင့်အတန်းကိုရရှိရန်သူ၏မိသားစုဝင်များဒုတိယအသင်းဝင်ဖြစ်ခြင်းသည်သူ့မိဘများ၏ဘ ၀ တွင်အဓိပ္ပါယ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်နက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖန်တီးစေသည်။ အဖြစ် ဂျိုဒီ Lundstram သူမ၏ Instagram စာမျက်နှာ t ကိုထောက်ပြသည်အမွေဆက်ခံသူဂုဏ်ယူသည့်မိခင်နှင့်ဖခင်တို့သည်ပရီးမီးယားလိဂ်၌သူတို့၏ကလေးကစားခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ဘဝ၏အပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့ကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ John Lundstram ၏စွမ်းရည်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မိခင်နှင့်ဖခင်နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏မိဘအုပ်ထိန်းမှုစွမ်းရည်ကိုသုံးခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူကြသည်။
John Lundstram သည်သူတို့၏သားသည်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုကျက်စားနေသည်ကိုတွေ့ရပြီးနောက်ဘဝကိုပျော်မွေ့နေသည်။ ပုံခရက်ဒစ် - Instagram
အခြားမိသားစုဝင်များ - John Lundstram ၏အခြားမိသားစု ၀ င်များနှင့် Lundstram အိမ်ထောင်စု၏မိခင်နှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း John Lundstram မိသားစုသည်ရင်းနှီးသောနှောင်ကြိုးဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအောင်မြင်တဲ့ခေတ်ပြိုင်လီဗာပူးလ်မိသားစုကိုမည်သို့ပုံဖော်သင့်တယ်ဆိုတာကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။
အခြား John Lundstram မိသားစုဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ပုံခရက်ဒစ် - Instagram
John Lundstram ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မရေတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - လူနေမှုပုံစံ
သူ၏အားကောင်းသောဘောလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကြောင့် Lundstram သည်ဘဏ္financialာရေးလွတ်လပ်မှုအတွက်မိမိ၏အစိတ်အပိုင်းကိုအတုယူခဲ့သည်။ ယခုသူ၏ဘဝပုံစံကိုသိရှိလာခြင်းကသင့်အားသူ၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
John Lundstram သည်စာရေးခြင်းအချိန်တွင်သူ၏စိတ်ကူးယဉ်ပန်းတိုင်များနှင့်အာရုံစိုက်မှုအပေါ်အာရုံမထားဘဲငွေများများများစားစားမပေးသောသူဖြစ်သည်။ မိမိနှင့်သူ၏မိသားစု ၀ င်များအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုသာအာမခံထားသည့်သာမာန်ဘဝတွင်နေထိုင်ရန်ငွေအလုံအလောက်ရှိသည်။ သူသည်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်လုပ်ခလစာကြီးခဲ့သော်လည်းဂျွန် Lundstram သည်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောလူနေမှုပုံစံကိုဆန့်ကျင်သောဆေးဖြစ်သည်ဟုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်သည်။
John Lundstram လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့သိကျွမ်းခြင်း။ Image Credit Gym4U နှင့် Instagram ကို
John Lundstram ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မရေတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မရေမတွက်အချက်အလက်
Lundstram အမည်အကြောင်း 19th ရာစုအတွင်း Lundstram မိသားစုနာမည်ရှိသောလူများသည်ပန်းပဲသမားများနှင့်လယ်သမားများဖြစ်ကြသည်။ (ရင်းမြစ် - Ancestry.Co.Uk).
သူမွေးဖွားခဲ့သည့်နေ့၏အဖြစ်အပျက်များ - Lundstram မွေးဖွားသောနှစ်သည်ဘရာဇီးလ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ 1994 ကမ္ဘာ့ဖလားကိုအနိုင်ရခဲ့သည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလူမျိုးရေးအမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲ (electionပြီ 29) ကိုကျင်းပခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းနယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။
1994 ရှိအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်: John Lundstram မွေးဖွားသောနှစ်တွင်၊ သေစေနိုင်သောအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်သည်ဇိုင်ရီရှိမေလ9၏အတိအကျဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူသားတို့သိပြီးသောမည်သည့်လူ့ရောဂါပိုးမဆိုဗိုင်းရပ်စ်များ၏သေဆုံးမှုနှုန်းအများဆုံးဖြစ်သည်။
ရဝမ်ဒါ 1994 တွင် -6Aprilပြီလ 1994 ညနေခင်းတွင်Lundstram မွေးဖွားခဲ့သည်နှစ်), ရ ၀ မ်ဒါသမ္မတJuvénal Habyarimana နှင့် Hutu နှစ်ခုလုံးဖြစ်သော Burundian သမ္မတ Cyprien Ntaryamira သယ်ဆောင်သည့်လေယာဉ်တစ်စင်းသည်ရ ၀ မ်ဒါနိုင်ငံ Kigali သို့ဆင်းသက်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်များဖြင့်ပစ်ချခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ယခုနှစ် 1994 ခုနှစ်, an သမ္မတရုံးလုပ်ကြံခံရပြီးနောက်လူနည်းစုဟူးတပ်စ်နှင့်လူနည်းစုတူဇီများအကြားရဝမ်ဒါတွင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းသည်ပြည်တွင်းစစ်တွင်လူပေါင်းသန်းတစ်ဝက်ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ John Lundstram ကလေးဘဝပုံပြင် Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At LifeBogger, ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြိုးစားသည်။ မမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးစားမည်။
Declan ဆန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Trent အလက်ဇန္ဒား-အာနိုးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်